musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Canada Breaking News » Kubhururuka Kubva kuIndia kuenda kuCanada Kunosara Hombe Aiwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Canada Breaking News • Health News • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kutakura Canada kuri kuwedzera Chiziviso kuAirmen (NOTAM) iyo inodzora dzese dzekutengesa uye dzakavanzika dzevatyairi kuenda kuCanada kubva kuIndia kusvika munaGunyana 21, 2021
Kutakura Canada inowedzera zvipingamupinyi pendege dzakananga kubva kuIndia.
Cargo-chete mashandiro, kuchinjiswa kwekurapa kana ndege dzemauto hazvisanganisirwe.
Vapfuuri vanobva kuIndia kuenda kuCanada nenzira isina kunangana vanofanirwa kuwana chaiyo COVID-19 pre-kuenda bvunzo kubva kune yechitatu nyika.
The Hurumende yeCanada iri kuisa pamberi hutano uye kuchengetedzeka kwevanhu vese muCanada nekuenderera mberi kutora nzira ine njodzi-uye yakayerwa kuvhura zvekare muganho. Nzira yekuCanada yekudzikisira matanho emuganhu inoziviswa nekuenderera mberi kwekutarisirwa kwedata iripo uye humbowo hwesainzi, kusanganisira mwero wekudzivirira wevaCanada uye nekuvandudza kwedu mamiriro ezvepachirwere.
Zvichienderana nezveruzivo rwechinyakare rwehutano kubva kuPublic Health Agency yeCanada, Kutakura Canada kuri kuwedzera Chiziviso kuAirmen (NOTAM) chinotadzisa vese vatengesi vevatengesi uye vega. ndege kuenda kuCanada kubva kuIndia kusvika muna Gunyana 21, 2021, na 23:59 EDT. Ndege dzese dzakananga dzekutengesa uye dzakavanzika dzevapfuuri vanoenda kuCanada kubva kuIndia dzinozviisa pasi peNOTAM. Cargo-chete mashandiro, kuchinjiswa kwekurapa kana ndege dzemauto hazvisanganisirwe.
Kutakura Canada iri kuwedzerawo izvo zvinodiwa zvine chekuita neyechitatu-nyika pre-kuenda COVID-19 mamorekuru bvunzo kune vafambi vanoenda kuCanada kubva kuIndia nenzira isina kunangana. Izvi zvinoreva kuti vafambi vanobva India kuenda kuCanada nenzira isina kunanga vacharamba vachidikanwa kuti vawane bvunzo yeECVID-19 pre-kuenda kubva kune imwe nyika yechitatu - kunze kweIndia - vasati vaenderera mberi nerwendo kuenda kuCanada.
The Hurumende yeCanada inoenderera mberi nekunyatso tarisisa mamiriro ezvepachirwere, uye ichange ichishanda pamwe neHurumende yeIndia nevashandisi venhandare kuona kuti nzira dzakakodzera dzaiswa kuitira kuti kudzoka kwakachengeteka kwendege dzakangobata kana mamiriro ezvinhu abvumidza.
Ipo Canada ichiramba ichifamba nenzira kwayo, chirwere chepachirwere uye kufukidza nhomba hazvina kufanana kupota nyika. Hurumende yeCanada inoenderera mberi nekuraira maCanada kuti vadzivise kufamba kusiri-kukosha kunze kweCanada - kufamba kwenyika dzese kunowedzera mukana wekuratidzwa kweECVID-19 nemisiyano yayo, pamwe nekuiparadzira kune vamwe. Border matanho anoramba aripo achichinja sezvo epidemiological mamiriro achichinja.